Vaovao - Ahoana ny fomba hamahana ireo olan'ny loko marefo amin'ny landy
Ny faharetana, ny taratra, ny fofona, ny fihenjanana, ny tanjaka ary ny maro hafa dia azonao avy amin'ny landy.
Ny lazany eo amin'ny tontolon'ny lamaody dia tsy zava-bita vao haingana. Raha manontany tena ianao na dia somary lafo kokoa noho ny lamba hafa aza io dia miafina amin'ny tantarany ny marina.
Raha tamin'ny andron'i Shina no nibata ny indostria landy dia noheverina ho fitaovana lafo vidy io. Ny mpanjaka sy ny mpanankarena ihany no afaka mividy izany. Tena sarobidy tokoa izy io ka nampiasaina ho toy ny mpanelanelana amin'ny fifanakalozana.
Na izany aza, amin'ny fotoana manomboka manjavona ny loko dia manjary tsy mendrika intsony izy io noho ireo tanjona mendri-kaja nividiananao azy.
Ny salanisa dia hanary izany. Fa tsy mila izany ianao. Amin'ity lahatsoratra ity dia hianaranao ny fomba hamahana ny olan'ny loko amin'ny silikao. Mamaky hatrany!
Alohan'ny handehanantsika amin'ireo fomba fiasa dia tsara fa efa fantatrao ny momba ny landy.
Ny zava-misy momba ny landy
Ny landy dia vita indrindra amin'ny proteinina antsoina hoe fibroin. Fibroin dia fibre voajanahary vokarin'ny bibikely ao anatin'izany ny tantely, tantely, vitsika mpanenona, hodi-kazo ary ny tiana.
Amin'ny maha-lamba be mpitroka azy, io dia iray amin'ireo lamba tsara indrindra amin'ny fanaovana palitao fahavaratra.
Andao izao hiresaka momba ny volon'ny loko.
Loko manjavona amin'ny landy
Ny fanjavonan-doko dia mitranga rehefa ny pigment ao amin'ny landy dia manintona ny molekiola manintona amin'ny lamba. Ho setrin'izany, manomboka very ny famirapiratany ilay fitaovana. Ary farany, manomboka hita ny fiovan'ny loko.
Efa mba nanontany tena ve ianao hoe maninona no manjavona ny lokon'ny landy? Ny antony lehibe indrindra dia ny fanalefahana. Indraindray, noho ny fiota simika. Fa amin'ny ankabeazan'ny tranga dia manjavona ny fihenan'ny tara-pahazavana amin'ny masoandro.
Antony hafa misy: ny fampiasana loko tsy dia misy kalitao, teknika fandokoana tsy marina, ny fampiasana rano mafana hanasana, anaovina ary rovitra, sns.
Ny fomba tsara indrindra hisorohana ny loko manjavona amin'ny landy dia ny fitandremana ny torolalan'ny mpanamboatra azy. Andao hihazakazaka mamaky ny sasany amin'izy ireo - Aza mampiasa rano mafana kokoa noho ny naroso, ho an'ny fanasan-damba, aza sorohana amin'ny milina fanasan-damba, ary ny savony sy ny vahaolana fanasitranana ihany no ampiasainao.
Dingana hanamboarana landy maty
Ny fanala dia tsy miavaka amin'ny landy, saika ny lamba rehetra mihalefy rehefa iharan'ny toe-javatra henjana. Tsy mila manandrana ny vahaolana tokana rehetra tonga aminao ianao. Ireto manaraka ireto dia fanafody tsotra namboarina namboarina mba hamboarina landy maty.
Fomba voalohany: asio sira
Ny fanampiana sira amin'ny fanasan-damba mahazatra anao dia iray amin'ireo vahaolana hahatonga ny fitaovanao landy efa lasa vaovao indray. Ny fampiasana kojakoja ara-dalàna ao an-trano toy ny peroxyde hydrogène afangaro amin'ny rano mitovy dia tsy avela, atsoboka mandritra ny fotoana fohy ny landy ary avy eo sasao tsara.
Fomba faharoa: Mandrosoa miaraka amin'ny vinaingitra
Fomba iray hafa hivoahana miaraka amin'ny vinaingitra mialoha ny fanasana. Izy io koa dia manampy amin'ny fanesorana endrika bika.
Fomba telo: Mampiasà soda na fandokoana
Ny fomba roa voalohany dia mety indrindra raha mihalefy ny lamba vokatry ny tasy. Fa raha efa nanandrana azy ireo ianao ary mbola maivana ny landy, dia azonao atao ny mampiasa soda sy mandoko.
Ahoana ny fomba fanamboarana ny efa maty fonosana landy mainty
Ireto misy dingana tsotra fanamboarana haingana azonao atao mba hamerenana amin'ny laoniny ny famirapiratan'ilay ondana landy vita amin'ny landy.
Araraho vinaigitra fotsy misy vera ao anaty lovia misy rano mafana.
Afangaroy tsara ny fangaro ary alentika ao anaty vahaolana ny ondana.
Avelao ao anaty rano ilay fonon-ondana mandra-pahafatiny tanteraka.
Esory ny ondana ary kobanina tsara. Tsy maintsy ataonao tsara ny masonao mandra-pahatapitry ny vinaingitra sy ny fofony.
Kitiho moramora ary aparitaho amin'ny farango na tsipika izay tsy tratry ny tara-masoandro. Tahaka ny efa nolazaiko teo aloha, ny tara-pahazavana dia manafaingana ny lokon'ny loko amin'ny lamba.
Ny tokony hataonao alohan'ny hividianana lamba landy
Alohan'ny ahazoana lamba landy dia angataho ny mpanamboatra anao hanome anao ny tatitra momba ny fahamendrehana amin'ny lamba landy. Azoko antoka fa tsy mila lamba landy miova loko ianao aorian'ny fanasana azy indroa na intelo.
Amin'ny maha-mpividy anao, na mpanjifa mivantana na mpivarotra ambongadiny / mpivarotra ambongadiny, tsy maintsy fantarinao ny fihetsiky ny lamba landy novidianao tamin'ny fanasana, fanosehana ary ny tara-masoandro. Fanampin'izany, ny faharetan'ny lokony dia manambara ny haavon'ny fanoherana ny hatsembohana.
Azonao atao ny misafidy ny tsy hijery ny antsipirian'ny tatitra raha mpanjifa mivantana ianao. Sush toy nyTatitry ny fitsapana SGS . Na izany aza, ny fanaovana izany amin'ny mpivarotra dia mety hametraka ny orinasanao amin'ny slip slip. Fantatro sy ianao fa mety handroaka ny mpanjifa hiala aminao izany raha toa ka ratsy ny lamba.
Fa raha tsy misy ny tatitra momba ny fanandramana dia azonao atao ny mihazakazaka manamarina ny tenanao. Mangataha ampahany amin'ilay lamba novidinao tamin'ny mpanamboatra azy ary sasao amin'ny rano klorinina sy ranomasina. Aorian'izay, kitiho amin'ny vy fanasan-damba mafana. Ireo rehetra ireo dia hanome anao hevitra ny faharetan'ny fitaovana landy.
Fotoana fandefasana: Sep-04-2021